I-Leo kunye neSagittarius - Ukuhambelana kwiSini, Uthando kunye noBomi - Leo
Leo kunye neSagittarius
Ukuhambelana kweLeo kunye neSagittarius ngoThando, uBomi, isondo, unxibelelwano, ubuhlobo kunye nokuthembela. x
Leo kunye neSagittariusUkuhambelana ngokwesondo kunye nobudlelwane obusondeleyo
Njengezibonakaliso ezimbini zomlilo, enye yazo ilungisiwe kwaye enye iguquguqukayo, uLeo kunye noSagittarius babelana ngothando olufudumeleyo omnye komnye. Xa beqala ukuthandana, ubudlelwane babo besini bunokubamangalisa bobabini, kuba baya kuziva bekhululekile ukuba babe kanye kanye xa bekunye nomnye. Eyona nto ingcono abanokuyenza kukusebenzisa i-trine phakathi kwamaLanga abo kunye nokwakha ukuzithemba komnye nomnye, ngakumbi ukuba bebenobudlelwane obufunayo okanye obungenantlonelo ngaphambi kobabo.
Eyona nto ilungileyo malunga nobomi babo bokwabelana ngesondo luthando ababelana ngalo. U-Leo ukhona ukuzisa umlilo wangaphakathi kwisenzo socansi, kunye neSagittarius ukutshisa ukwanda, iindawo, izikhundla kunye ne-horizons. Bobabini baya kunandipha omnye komnye ngendlela evuthayo kwaye bahloniphe imizimba yomnye, iingqondo kunye nobuntu bonke. Ukuba bayakhubeka omnye komnye kwaye uthando luzalwe, ubomi babo bokwabelana ngesondo bunokumela unxibelelwano olugqibeleleyo kubo bobabini.
Leo kunye neSagittariusThembela
Ekubeni zivuselela imvakalelo yokunqabiseka nokuzithemba komnye nomnye, abafane babonise ikhwele okanye bangaziqondi izenzo zomnye. U-Leo uthanda ukuba liziko lokuqwalasela kwaye azive ekhangayo kwaye enqwenelekayo, kodwa le nto iqabane leSagittarius linokubonelela ngobuninzi. Ngokuqhelekileyo akukho sizathu sokuba baphulukane nokuthembana ngokuhamba kwexesha, ngaphandle kwaxa iimvakalelo zabo ziqala ukuphela. I-Sagittarius luphawu oluguquguqukayo, kwaye ngenxa yoko, banokuwela ngaphakathi nangaphandle kothando ngokukhawuleza kwaye rhoqo. Kwimeko apho u-Leo eqala ukuziva eshiywe kwaye engathandwa, ukukrokra kuya kuphakama, kwaye yeyiphi indlela engcono yokuphendula xa ukrokrela kunokuba ukrokre ngokwakho, iSagittarius inokucinga. Nangona bobabini besenokungayazi ingcambu yemicimbi yabo xa ukuthembana kulahlekile, idla ngokuba kukunqongophala kothando.
Leo kunye neSagittariusUnxibelelwano kunye nengqondo
I-Leo kunye ne-Sagittarius bobabini bagxile kakhulu kwimisebenzi yabo yengqondo. Leo ngenxa yokuba balawulwa yiLanga kwaye oku kubanika ulwazi oluthile olunengqiqo kunye Sagittarius kuba bahlala bejolise phezulu ukusuka eMhlabeni, ifilosofi kunye noluvo olubanzi. Le yinto eza kubanceda banxibelelane phantse ngayo nantoni na, nangona umdla wabo unokwahluka kunye neemvelaphi zabo ngokunjalo. U-Leo unamandla okunceda iSagittarius xa ilahlekile, kwaye oku kunokwenzeka rhoqo ukuba izicwangciso zabo zikhulu. I-Sagittarius iya kunika u-Leo umbono kunye nokukwazi ukuqonda ikusasa lemizamo yabo yangoku yokudala. Ngokudibeneyo, benza inxalenye ebalulekileyo yenkqubo yokudala.
Njengabantu ababini abazaziyo kakhulu abaneemvakalelo ezinamandla zoBuqu kunye nobuntu babo, banokwakha ukuqonda okumangalisayo. Bobabini banokukhwaza, banxibelelane kakhulu, kwaye oku kunokwenza ubudlelwane babo buphawuleke ngokwenene, bethelela ukusondelana kwabo ngokuvuleleka ababelana ngako ukuze bangene kwihlabathi lomnye. Ekubeni bobabini benobuntu obuqinileyo, abayi kuziva besongelwa sisimo somnye nokomelela kwezimvo neenkolelo zabo. Ekuphela kwento abanokuthi bayiswele kukuqonda kwiimpembelelo zangaphandle kunye nobudlelwane babo obuvuthayo bunokubenza babe rhabaxa kakhulu omnye komnye, nakubo ngokwabo. Nangona kunjalo, amandla okudala kunye nendlela yabo esebenzayo ebomini kufuneka ibagcine benomdla omnye komnye kwaye benxibelelene kakuhle ixesha elide.
Leo kunye neSagittariusIimvakalelo
Njengemiqondiso emibini yoMlilo, uLeo kunye noSagittarius badla ngokuthanda kakhulu kwaye bavuleleke ekuboniseni indlela abaziva ngayo. Baza kufuna ukubonisa uthando lwabo, babelane ngothando lwabo kwaye benze ngokweentshukumisa zabo kangangoko banako. Oku ngamanye amaxesha kunokuba kuninzi, kuba akukho mvakalelo ethambileyo, ebuthathaka okanye amandla aya kuhlonitshwa. Okunye ukulungelelana kuya kuba luncedo, ngakumbi ukuba bahlala besilwa. Ungquzulwano phakathi kwabo lunokuba ndlongondlongo, hayi ngenxa yokuba benobundlobongela ngokwabo, kodwa ngenxa yokuba imililo emibini ibangela umlilo omkhulu ngakumbi. Iphantse yangathi zinokugqabhuka ukuba zombini zihamba kakhulu.
Xa bethandana, oku kubonakala ngathi lolona thando lufudumeleyo, lothando kwiplanethi yoMhlaba. Kwiimeko ezininzi, oku kuya kwanela ukoyisa nabuphi na ubunzima ngendlela yabo, kodwa ngamanye amaxesha aba maqabane bobabini badla ngokulibala uvakalelo lwabo lokwenyani. Kufuneka baqonde xa ixesha lifikile lokucotha, bahlale ekhaya, bangathethi nto kwaphela kwaye bathule nje. Ukuba abakwenzi oko, mhlawumbi baya kuphethukela kumntu onokubanika olu hlobo loxolo ngamaxesha athile.
Leo kunye neSagittariusImilinganiselo
Ngokuqinisekileyo baya kuxabisa amandla omntu ngamnye kunye nobuntu obumangalisayo, ukukwazi ukufudumezana ngandlela zonke kunye nothando abanalo ngaphakathi, ngamnye ngeenjongo zabo. Sekunjalo, akulula ukuchazela uLeo ukuba kutheni kulungile ukubaleka kwihlabathi, ukuhamba eGreenland yedwa, kwaye udle iibhugi kwindawo ethile e-Asia, ngaphandle kokuba umntu ufuna ukubonisa isibindi sabo. Kwelinye icala, iSagittarius ayiqondi kakuhle ukuba kutheni besiya kwiindawo ezintle kwaye bajongane nabo bonke abantu ekulula ukubaleka. Oku akubangelwa kukunqongophala kwenkalipho, kodwa ukunqongophala kwentsingiselo abavakalelwa ngayo xa befuna ukuchitha ixesha labo kubantu abadiniweyo. Ngoko nangona bexabisa into enye - isibindi, bayibona ngamehlo ahlukeneyo.
Leo kunye neSagittariusImisebenzi ekwabelwana ngayo
Singacinga ukuba uLeo uthanda ukuhamba kanye njengeSagittarius. Banamandla kunye nesidingo sokukhangela ulwazi kunye nokwandisa i-horizons yabo, kodwa abathandi ncam ukuhamba okungako. Oku kungenxa yendalo yabo emiselweyo, kwaye nangona bengathanda ukutyelela nayiphi na indawo yehlabathi, abayi kuyenza ngesantya esifanayo neSagittarius, kwaye abayi kukhetha iindawo ezifanayo. ISagittarius, kwelinye icala, ayiqondi kakuhle ukuba kutheni uLeo efuna ukwenza phambi kwabantu abaninzi xa kukho abantwana abalambileyo eAfrika. Le yimizekelo eyenziwe lula, kodwa isinceda kakuhle ukuze siqonde ukuba banokusebenzisana kakuhle kangakanani, bahambe kunye, baqhube kunye, kodwa kuphela ukuba bavuleleke ngokwaneleyo ukuba basebenzise injongo kunye namandla kwiindlela zabo.
I-Leo kunye ne-Sagittarius yindibaniselwano yomlilo enhle kakhulu yemiqondiso, kwaye xa abantu ababini abanale miqondiso yeLanga behlangene, ngokuqinisekileyo bayathandana. Olu thando lufudumele, lunomdla kwaye luyakhuthaza, kwaye baya kuba nethuba lokudala, ukwenza kunye nokuzonwabisa kunye ixesha elide njengoko bevakalelwa ngolu hlobo. Nangona kunjalo, iqabane leSagittarius linokuphulukana nomdla Leo kuba bathanda ukutyhalwa kude yindalo yabo engatshintshiyo, ezinzileyo. Ekuphela kwendlela abanokuthi bagcine ngayo inkanuko kunye neemvakalelo zabo, kukuba bayakwazi ukumamela iimvakalelo zabo ezithambileyo kwaye bahlala bethambile kwaye banovelwano omnye komnye.
Aquarius Gemini Emanzini Virgo Khetha Uphawu